Weather in Thailand tamin'ny febroary ~ Journey-Assist - Inona no atao
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Toetany sy toetrandro any Thailandy » Weather in Thailand tamin'ny febroary
Weather in Thailand tamin'ny febroary
Any amin'ny ankamaroan'ny firenena avaratra manana toetrandro mafana, fanta-daza amin'ny faran'izay mangatsiaka be ny faran'ny volana febroary, fa any Thailand any amin'ny faran'ny ririnina, ny andro tsara dia napetraka tsy ho an'ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina ihany, fa ho an'ny olom-pantatra miaraka amin'ny firenena sy ny kolontsain'izy ireo. Tamin'ny volana febroary, ny andro dia tsy azo antsoina hoe mafana, fa lavitra ny hatsiaka. Avy be ny orana manerana ny firenena.
Any amin'ny faritra avaratr'i Thailand, ny volana febroary dia mafana ny andro, mandritra ny andro dia miakatra +32 degre ny mari-pana, amin'ny hariva dia milatsaka ho +24. Tsy dia misy rotsak'orana firy ary ambany ny hamandoana rivotra, mandritra izany fotoana izany dia mivoaka manodidina ny 55% eo. Mitovitovy ny toetrandro toy izany any Bangkok. Ny lanitra tsy misy rahona dia mifaly isan'andro, ary ny rivotra dia mandrivotra +33 mandritra ny andro.
Ny febroary no heverina ho volana tsara indrindra amin'ny fialan-tsasatra any Pattaya. Ny hafanana sy ny hatsiaka amin'ny alina dia ahafahanao miaina ny hakanton'ny toetrandro tropikaly amin'ny vanim-potoana maina. Ny mari-pana mandritra ny andro dia manomboka amin'ny +33 degre mandritra ny andro ka hatramin'ny +26 degre amin'ny alina. Mihamafana hatramin'ny +28 degre ny ranomasina. Amin'izao vanim-potoana izao, somary mangina ny Telena Thailande, tsy misy onja mahery eny an-dranomasina. Ny tena hatsaran'ny rano madio kristaly dia misokatra alohan'ny mason'ireo mpandehandeha!
Tamin'ny faran'ny volana Febroary, ny toetr'andro ao Koh Samui dia miorina amin'ny farany ary mankasitraka ny fialan-tsasatra amin'ny andro mafana sy mangina. Ny onjan-dranomasina any ambanin'ny ranomasina, ary ny mpitia an-dranomasina dia nandeha nitady onja tsara tany amin'ny morontsiraka hafa. Ny haavon'ny mari-pana isan'andro dia tsy mihoatra ny +28 degre, na dia amin'ny tolakandro aza dia afaka miakatra hatramin'ny 35 degre ny thermometer. Amin'ny faran'ny ririnina, ny rano amoron-tsiraka ao amin'ny nosy dia tsy hita taratra sy mafana. Manodidina ny +28 degre ny mari-dranomasina. Misaotra noho ny toe-java-misy amin'ny toetr'andro toy izany fa ny tendron'ny fialan-tsasatra dia hita eto amin'ny nosy amin'izao fotoana izao, indrindra ireo mpizahatany maro avy any Eoropa tonga tonga te hahita fahafinaretana farany amin'ny fitsangatsian'ny sambo sy ny yachts.
Tsy toy ny fahanginan'ny Hoalan'i Thailand, ny ranomasina Andaman tamin'ny volana febroary dia iharan'ny rivotra izay miteraka fepetra mampihatra amin'ny fanatanjahan-tena an-dranomasina. Ao Phuket sy any amin'ny faritany Krabi, ny toetrandro somary mafana dia mirotsaka amin'ny orana kely. Amin'ny tolakandro, dia mahatratra hatramin'ny +30 degre ny rivotra, amin'ny alina dia mihena amin'ny 5-7 degre. Ny ranomasina dia mahazo aina afaka milomano ao mandritra ny andro, manomboka amin'ny +28 ka hatramin'ny +30 degre. Ny hamandoana dia ambany eo amin'ny 50%. Amin'ny toe-piainana manara-penitra toy izany, ny haingam-pandeha dia haingana dia haingana na ho an'ny olona mora tohina amin'ny toetr'andro.
Endrika fitsaharana amin'ny volana febroary
Niavaka manokana ny volana febroary satria amin'ny faran'ny ririnina dia mankalaza ny Taom-baovao sinoa ny firenena. Talan'ny tompon-tany rehetra ity fialan-tsasatra ity. Tsy ho mankarary azy ny any Bangkok na ny nosy izay ahitana ny fampisehoana pyroteknika sy hetsika fialamboly isan-taona.
Amin’ny faran’ny volana teo dia mihena kely ny fandehanan’ireo mpizahatany, indrindra any Pattaya. Amin'izao fotoana izao, mendrika ny handehanana any Thailand: ny vidim-piainana dia afaka gaga, ny mpizahatany any amin'ny toerana malaza sy ny toerana mahaliana no nanjavona, ary mora ny mividy tapakila ho an'ny sidina an-trano. Amin'ity herinandro farany amin'ny volana febroary ity dia mahafinaritra ny mandany fotoana any amoron-dranomasin'ny tanàna na amin'ireo nosy akaiky miaraka amin'ny zanakao. Tsy afaka matahotra ny hijanona ianao raha tsy misy seza dekana sy elo amoron-dranomasina, ary any amin'ny valan-javaboary dia tsy mila miandry ianao. Ny fialan-tsasatra dia milamina amin'ny tontolo milamina sy milamina.
Aiza ny fialan-tsasatra tena tsara indrindra any Thailandy amin'ny volana febroary?
3 andro (44.6 mm.)
4 andro (55.5 mm.)
2 andro (36.2 mm.)
3 andro (51.0 mm.)
3 andro (47.2 mm.)
3 andro (46.3 mm.)
2 andro (35.3 mm.)
3 andro (41.0 mm.)
4 andro (47.4 mm.)
3 andro (38.2 mm.)
4 andro (56.9 mm.)
3 andro (43.3 mm.)
5 andro (60.9 mm.)
4 andro (55.4 mm.)
4 andro (55.6 mm.)
3 andro (43.9 mm.)
4 andro (73.9 mm.)
4 andro (56.1 mm.)
3 andro (45.0 mm.)
2 andro (35.5 mm.)
1 andro (36.1 mm.)
4 andro (59.4 mm.)
3 andro (46.7 mm.)
3 andro (43.2 mm.)
3 andro (34.5 mm.)
4 andro (53.7 mm.)
3 andro (50.3 mm.)
1 andro (16.4 mm.)
2 andro (40.6 mm.)
1 andro (34.0 mm.)
4 andro (55.3 mm.)
1 andro (19.4 mm.)